Tag: halavan'ny video | Martech Zone
Tag: halavan'ny video
Fantatrao ve ny maha-zava-dehibe ny varotra horonantsary amin'ny fisian'ny Internet amin'ny orinasanao trano? Tsy maninona ianao mpividy na mpivarotra dia mila mari-pahaizana marika mendri-kaja sy mendri-kaja ianao hisarika ny mpanjifa. Vokatr'izany, masiaka loatra ny fifaninanana amin'ny varotra trano ka tsy afaka manatsara ny orinasanao kely ianao. Soa ihany, ny varotra niomerika dia nanome orinasa isan-karazany manana lafin-javatra ilaina mba hanatsarana ny marika. Ny marketing video dia
Paikady tena ilaina 4 ho an'ny orinasa an-tserasera marobe
Zoma Janoary 5, 2018 Alahady 7 Janoary 2018 Douglas Karr
Tsy statistika mahagaga izany, saingy mbola mahavariana ihany - mihoatra ny antsasaky ny varotra ao amin'ny magazay no voataonan'ny nomerika tamin'ny taon-dasa tamin'ny fampahalalana farany momba ny varotra ny orinasan-toerana maro an-tserasera. MDG dia nanadihady sy namantatra tetika marketing dizitaly efatra tena ilaina izay tokony haparitaky ny orinasa isan-toerana izay mampiditra fironana fikarohana, sehatra, atiny ary fitaovana. Mikaroha: Manatsara ny "Open Now" sy ny toerana - Miovaova ny mpanjifa amin'ny fitadiavana zavatra miorina amin'ny ho avy toa
Alatsinainy, Novambra 14, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
10 taona mahery lasa izay dia nanoratra aho fa mitombo ny faharetan'ny fifantohana. Rehefa niara-niasa tamin'ny mpanjifa izahay nandritra ny taona maro, dia manaporofo hatrany izany na eo aza ny angano fa tsy hijanona eo ny mpamaky, ny mpijery ary ny mpihaino. Ireo mpanolotsaina dia manohy milaza fa efa nihena ny vanim-potoanan'ny saina, antsoiko hoe bollox. Ny niova dia ny safidy - manome antsika fotoana hialana haingana amin'ny tsy misy fotony, kalitao ratsy, na atiny tsy manintona hahitana atiny lehibe. Tamin'izaho vao nanomboka